WAR DEG DEG AH:Iska hor imaad xoog leh oo ka dhacay Jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq & Khasaare ka dhashay oo laga soo sheegayo…. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Iska hor imaad xoog leh oo ka dhacay Jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq & Khasaare ka dhashay oo laga soo sheegayo….
TUKARAQ(P-TIMES)– Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in uu dhacay goor dhaw iska horimaad xoog leh oo dhexmaray ciidamo sahan ah oo kakala tirsan Puntland & Somaliland, waxaana la xaqiijiyey in uu khasaare ka dhashay.
Mid kamid ah dadka deegaanka Tukaraq oo maalmihii lasoo dhaafay ku laabtay halkaas ayaa sheegay in uu arkayay baabuurta gurmadka deg deg ah oo ka timi dhinaca Buurta loo yaqaano LABO MADAXLEEY oo ah goob ay labada dhinacba ka joogaan ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Puntlandtimes.com oo la xariirtay labada talis ee Puntland & Somaliland wey ka gaabsadeen, inkastoo Somaliland ay u xaqiijiyeen in uu dhacay iska horimaadkan, khasaarena jiro kuna eedeeyeen dhinaca Puntland, haddana ma jirto faahfaahin dheeraad ah.